Fadeexad ku soo baxday Qareenka gaarka ah ee Madaxweynaha Maraykanka | allsaaxo online
Fadeexad ku soo baxday Qareenka gaarka ah ee Madaxweynaha Maraykanka
Qareenka khaaska ah ee Madaxweyne Donald Trump ayaa 500,000 oo doollar ka helay shirkad la sheegay inay ku xiran tahay shirkadda Ruushka laga leeyahay ee oligarch, sida ay ku warramayso warbaahinta Maraykanka.
Shirkaddo doonayay inay maamulka hawlo ka dhamaystaan ayaa doorashadii 2016kii ka dib lacago u shubay shirkad uu aasaasay qareen Michael Cohen, sida lagu sheegay warbixinta oo soo xiganaysa diiwaanno maaliyadeed.
Cohen ayaa sidoo kale lacag siiyay gabadh ku caanbaxday jiliddda aflaanta galmada ah oo sheegtay inay la seexatay Trump.
Qareenka fannaanada ayaa markii u horraysay Twitter-ka ku shaaciyay lacagta Talaadadii.
Sida uu ku warramay wargeyska New York Times Shirkadda Cohen ee Essential Consultants LLC, ayaa sannadkii hore nus milyan doolar ka heshay Columbus Nova oo ah shirkad maalgashi oo fadhigeedu yahay magaalada New York taasoo xiriir maaliyadeed la leh shirkadda uu maamulo oligarch ee uu maamulo Viktor Vekselberg oo Ruush ah.